इन्द्र दाइको साहित्यिक यज्ञ | चितवन पोष्ट
गृह » इन्द्र दाइको साहित्यिक यज्ञ
इन्द्र दाइको साहित्यिक यज्ञ
होली पूर्णिमाको भोलिपल्ट साहित्यिक यज्ञ थियो इन्द्र दाइको । साहित्यमा साधना, सद्भाव र अनुराग राख्नेको क्रम बढ्दै गई उपस्थिति घनीभूत थियो । सुदूरबाट उपस्थिति जनाएर मित्रताको दृष्टान्तसमेत देखियो । पवित्र कामना वा उद्देश्य राखेर जब धेरै मन, वचन र कर्महरुको समायोजन हुन्छ, जब धेरै हातहरुले मूल प्रयोजनका निम्ति एकसाथ साथ दिन्छन्, तब त्यो सत्कर्म नै यज्ञ हुन्छ । यज्ञ मानेरै उनले प्रसादस्वरुप कृति पनि निःशुल्क वितरण गरे । भूमिकाकारले पनि निःशुल्क भूमिका लेखी यज्ञको हवनार्थ चरू पु¥याएकै थिए ।
उनले यसअघि पनि एक यज्ञ गरिसकेका थिए । त्यसदिन पनि एकसाथ तीन कृति लोकार्पण गरेर यज्ञ सम्पन्न भयो । त्यस यज्ञमा उनले परिवारभित्रैबाट कान्छी नातिनीलाई प्रमुखअतिथि बनाएर परिवारभित्रै साहित्यिक भावनाको बीजारोपण गर्न खोजे । साहित्यिक कर्म समाजको सत्कर्म हो भन्ने बुझेरै उनले वंशपरम्पराभित्रै त्यसलाई विकसित तुल्याउन चाहे । साहित्यप्रति नै अनुदार देखिएको समाजमा आधुनिक सुखसुविधा पाएका सन्तानले साहित्यप्रति कति रूचि राख्लान् भविष्यले बताउला । जे होस्, त्यस नवीन परिपाटीलाई वक्ताहरुले पनि सराहनाका शब्दहरु उद्घोष गरे ।
कृति प्रकाशन गर्नु त्यति सरल कार्य होइन । यो घर बनाउनुजत्तिकै जटिल कार्य हो । घर आफ्ना लागिमात्र हुन्छ, तर कृति समाजका लागि हुन्छ । त्यसैले, घर भन्नुभन्दा यज्ञ भन्नु नै उचित होला । आफ्नै खर्चमा एक कृति निकाल्न त दाँतबाट पसिना छुट्छन्, त्यसमा उनले पारिवारिक लगानीमै तीन कृति निकाले । यसरी एकसाथ तीन कृति निकाल्नुका पछि कारण के छ त भन्दा यो पनि जटिलताभित्रकै एक सरलीकरण हो । एक मट्याङ्ग्राले तीन चरा मार्नु भनेझैँ सहयोगको प्रस्ताव राख्न परेपछि सहयोग गर्नेले पनि एकसाथ तीन कृति राखिदिन्छ ।
एकै सहयोगले तीन काम बन्छन् । यसमा आफ्नै आन्तरिक हेतुले पनि ठूलो काम गरेको छ । यो बुद्धिमानहरुले गर्ने समयको उपयोग पनि हो । एक एक गरी गर्नुभन्दा एकसाथ गर्दा खर्चको भार पनि त स्वतः कम हुन्छ । गर्नैपर्नेले यो आँट गर्नु खर्चमा गरिएको किफायत पनि हो ।
एक टिप्पणीकारले भने– इन्द्र रेग्मीले चार दशकयता राजनीतिक कर्म र साहित्यिक कर्म एकसाथ गर्दै आएका छन् । आफ्नो राजनीतिक कर्ममा उनी अनुशासित र निष्ठावान् छन् भने साहित्यिक कर्ममा स्वतन्त्र र साहसी । उनले भीषण द्वन्द्वको भयप्रद वातावरणमा पनि आफ्नो निर्भय पनको छाप छोडिसकेका थिए, त्यसको प्रत्यक्ष साक्षी यही पंक्तिकारसमेत थियो । उनले राजनीतिबाट वैयक्तिक कुनै आश राखेका छैनन् । त्यसैले, उनी बढी साहसी छन् । राजनीति गर्नेहरु भनौँ वा सत्ताका हिमायतीहरु भनौँ, ती समाजप्रति बढी कृपण बन्छन् । ती सेवाबाट राजनीति गर्ने होइन, राजनीतिबाट सेवा पाउने अभिलाषा राख्छन् । परिपाटी ठीक विपरीत छ । उनीहरु समाजसेवाका नाउँमा समाजलाई दिनुभन्दा समाजबाटै लिने चेष्टा गर्छन् । कर्मचारीका भन्दा तिनका तलब सुविधा अधिक छन् । तर, उनले आफ्नो साहित्यिक पहिचानका निम्ति सयौँको उपस्थितिमा एकसाथ तीन कृतिहरु निःशुल्क वितरण गरी समाजप्रति आफ्नो उदारताको भाव प्रदर्शित गरे, त्यसैलाई व्यवसाय बनाएर आफ्नो स्वार्थ हेरेनन् ।
त्यस्तै अर्का टिप्पणीकारले भने– उनको लेखनमा व्यंग्य र आक्रोश छ । विकृति÷विसंगतिप्रति तीव्र प्रहार छ । उनी अरुलाई मात्रै होइन आफ्नैलाई पनि व्यंग्यको झटारो हान्न चुक्दैनन् । व्यंग्य कसैलाई तोकेर होइन केहीलाई ताकेर हुनुपर्छ, अर्थात् व्यंग्य व्यक्तिपरक होइन प्रवृत्तिपरक हुनुपर्छ । उनका केही व्यंग्य तोकेर छन् । यथार्थमा त्यो उनको कमजोरी हो । साहित्यिक लेखनमा व्यंग्य शिष्ट र शालीन हुनुपर्छ । त्यसको भाषा पनि मर्यादाको सीमाभित्रै रहनुपर्छ । अखबारी लेखनमा झैँ क्षुद्र प्रकृतिको हुनुहुँदैन । उनका केही अभिव्यक्तिमा छिचरा शब्दहरुको सपाट प्रयोग छ । गौरवपूर्ण लेखनका निम्ति उनले त्यसमा सुधार गर्नैपर्छ, बाँकी त उनका लेखनमा व्यञ्जना शक्तिको तीव्रता छ । स्मरणशक्तिमा सघनता र निरीक्षण शक्तिमा गहनता छ । पूर्वाग्रहको पनि कुनै गन्ध छैन । कूटिलताको पनि कुनै प्रयोग छैन । सरलता र इमानदारिताको मधुर भाव सबैतिर झल्किन्छ । एक मर्मभेदी निबन्धकारले मित्रताको प्रसंग उधिनेरै यस तथ्यको पुष्टि गरे । मन्तव्यका क्रममा अबको लेखन व्यक्तिपरक नभएर प्रवृत्तिपरक हुनेछ, आफ्नै स्वभावसँग जुधेर पनि म सत्यको अन्वेषण गर्नेछु– कृतिकार स्वयम्ले पनि सो सकार गरे ।
फेरि अर्का मन्तव्यकारले उनका समग्र कृतिको स्तर खोतल्दै संक्षिप्तमा भने– पद्य धारामा भन्दा गद्य धारामा उनको विशिष्टता छ । त्यो विशिष्टता के भने उनी स्वाभाविक व्यंग्य लेख्छन्, त्यसमा सरलता र सम्प्रेषणीयताको सम्पुट छ । व्यंग्यमा अलिअलि घोचपेचको पिरोअमिलो भएन भने व्यंग्यको प्रयोजन नै के रह्यो । नचिमोटीकन को जाग्छ ? नठोसीकन अगुल्टो कहाँ बल्छ ? जोरसोर नभई को ब्युझिन्छ ? यस्तै उनका कृतिमाथिको विमर्श र बहस चर्कैसँग चल्यो । सही लेखकले आफू बाँचेको समय र आफ्नो स्वभाव लेख्छ । जसले आफ्नो लेखनमा समय र स्वभावलाई सजीव रुपमा उतार्छ, त्यो शक्तिशाली लेखक बन्छ । सबैले इन्द्र रेग्मीको लेखनप्रति यही निष्कर्ष निकाले ।